Masangano Okurudzira Kurangwa kweVanoita Mhirizhonga
Mbudzi 15, 2011
Masangano akazvimirira oga achitungamirwa neZimbabwe Human Rights Association-ZIMRIGHTS ari kukurudzira hurumende yemubatanidzwa kuti isakudze kutaura nezvemhirizhonga pasina chinobatika chairi kuita mukugadzirisa mhirizhonga iri kuitika munyika.
NeChishanu, mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, pamwe nemutungamiri weMDC diki, VaWelshman Ncube, vakasangana nenhengo dzemapato avo vachikurudzira kuti munyika muite runyararo.
Asi mumwe mukuru wemauto, Chief of Staff kumuzinda wemauto, Major General Martin Chedondo, vaive mushishi rekuudza mauto kuti MDC-T imhandu yenyika.
VaChedondo vaitaura pamabiko ePresidential Guard muHarare. Vakatiwo nyaya yekuda kuvandudza mashandiro emauto iri kutaurwa zviroto nekuti hakuna kwazvinosvika. Vakatiwo MDC-T ikapinda mumasimba munyika munodeuka ropa.
NeSvondo, bepanhau reNewsDay rakati sachigaro weZanu-PF, VaSimon Khaya Moyo, vakatiwo kana vatsigiri veZanu PF vachinge varohwa, vanofanira kudzorera. VaKhaya-Moyo, avo vabvuma kuti vakataura mashoko aya, vakataura izvi pamusangano webato ravo paMkoba Teachers College kuGweru.
Mukuyedza kumisa mhirizhonga sachigaro weJOMIC mwedzi uno, Amai Priscilla Misihairambwei-Mushonga veMDC diki, vanoti vakatuma gurukota rezvemitemo, VaPatrick Chinamasa, kuti varonge musangano pakati peJOMIC negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika VaEmmerson Mnangagwa uye mukuru wemapurisa, VaAugustine Chihuri, kuitira kuti vakurukure nyaya yemhirizhonga.
Mumwe wevanomirira MDC-T muJOMIC nemunhaurirano, VaElton Mangoma, vashora zvikuru mashoko aVaKhaya Moyo vachiti anokurudzira mhirizhonga.
Mukuru weZimRights, VaOkay Machisa, vanotiwo vatungamiri vezvematongerwo enyika havafanire kungotaura nezvemhirizhonga asi kuti vanofanirwa kuona kuti vari kukonzera mhirizhonga, varangwa nemitemo yenyika.